परिवारसंग घुमेर दशैं मनाउने योजना बनाएको छु : राम प्रसाद बडाल – Contemporary News Portal From Nepal
परिवारसंग घुमेर दशैं मनाउने योजना बनाएको छु : राम प्रसाद बडाल
Published at: October 6, 2016 1:02 pm
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा रहेको टाइमलाईन स्कुल छोटो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा बिशिस्ट पहिचान बनाउन सफल विद्यालय हो । आफ्नो कुशल नेतृत्व कला र सामुहिक गतिशीलता मार्फत स्कुललाई छोटो समयमा परिचीत बनाएका टाईमलाईन स्कुलका प्रधानाध्यापक राम प्रसाद बडालसंग आशाका किरणका सुदर्शन बजगाईले गरेको दशैं बिशेष कुराकानीको संपादित अंश :
आरमै हुनुन्छ ?
हजुर ठिक छु ।
दशैंको चहलपहलले छोएको छ ।
के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा लामो बिदा पाउने भनेको यो समयनै भएकाले परिवारसंगै काठमाडौँ नजिकको ठाउँमा घुम्न जाने योजना छ । गाउँ जाने योजना पनि छ ।
बाल्यकालको दशैं र अहिले को दशैंमा के फरक पाउनु भएको छ ?
मैले पहिले र अहिलेको दशैंमा आकाश पातलको भिन्नता पाएको छु । पहिला खसी काट्ने,कमेरो र रातो माटोले घर पोत्ने गरिन्थियो र अहिले सहरीकरणले गरेर होला त्यो दैनिकी जस्तो भैसक्यो र पहिलाको कुरा बिर्सदैं गएको भान हुन्छ । पहिला दशैं कहिले आउँछ भनेर औंला भाचिन्थियो अहिले त्यो उर्जामा कमी आएको छ ।
दशैंको सबैभन्दा रमाईलो पक्ष ?
म तराईवासी भएकाले लिङ्गे पिङ र सालको पिङ बनाएर खेल्दाको क्षण सबैभन्दा खुसी लाग्दथियो । बयल गाडा लिएर जंगलमा जाने अनि साल काटेर र बाबियोको डोरी बाटेर पिङ बनाउँदा सर्‍है रमाईलो लाग्दथियो ।
राजनैतिक दल मिलेर जाने प्रेरणा यो चाडले दिन्छ भन्ने बिश्वास लिएको छु । अन्त्यमा म टाईमलाईन स्कुलका सम्पुर्ण विद्यार्थी अभिभावक,शिक्षक शिक्षिका शुभचिन्तक एवम सम्पुर्ण नेपालीमा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको सुख, शान्ति,समृद्धि, सु-स्वास्थ एवम दिर्घायुको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।